Maxkamad ku taalla dhuusamareeb oo xukun ku riday Wariye Maxamed Cabdiweli Tooxow – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Axad, Sep, 30, 2018(HNN) Maxkamad ku taalla magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta Maamulka Galmudug, ayaa lix bilood oo xarig ah ku xukuntay wariye lagu magacaabo Maxamad Cabdi Tooxoow.
Sheekh Xasan Gayrte oo ah Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Galmudug ayaa ku dhawaaqay xukunka, isagoo sheegay in wariyaha oo ku eedaysnaa faafinta warar been abuur ah, lagu xukumay xabsi muddadiisu tahay lix bilood.
Wariye Tooxoow oo muddo asbuuc ah ku xirnaa saldhigga dhexe ee booliska degmada Dhuusa-mareeb, wuxuu ka hawlgalayey Idaacadda Kulmiye ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Universal Tv oo xaruntiisa dhexe tahay magaalo madaxda dalka Ingiriiska ee London.
Ciidamada Maamulka Galmudug ayaa 22dii bishan xabsiga u taxaabay Wariye Tooxoow, kaddib markii lagu soo eedeeyey in uu baahiyey warar been abuur ah, kuwaas oo liddi ku ah ammaanka iyo xasilloonida deegaannada Galmudug.
Ururka Saxafiyiinta Qaranka ee NUSOJ ayaa cambaareeyey xarigga iyo xukunka lagu riday Wariye Tooxoow. Qoraal isla maanta oo Axad ah kasoo baxay xafiiska dhexe ee NUSOJ, waxaa lagu sheegay in xukunkaasi yahay mid aan caddaalad ku salaysnayn xadgudubna ku ah madaxbannaanida saxaafadda iyo xorriyatul qowlka labadaba.
Maxkamad ku taalla dhuusamareeb oo xukun ku riday Wariye Maxamed Cabdiweli Tooxow added by admin on 30/09/2018